नयाँ लेनोवो ट्याब्लेटहरू हुन् सबै प्रकारका जेबहरूका लागि Androidsis
मानुएल रामीरेज | | लेनोभो, Android ट्याब्लेटहरू
एन्ड्रोइड ट्याब्लेटहरू आफैंको स्मार्टफोन जस्तो अन्य उपकरणहरूको रूपमा उत्साहजनक छैनन्। यद्यपि त्यहाँ त्यस्ता कम्पनीहरू छन् जुन ट्याब्लेटहरू सुरू गर्न जारी राख्छ लेनोभोबाट पाँच नयाँ। ती Len लेनोभो ट्याब्लेटहरू बीचमा हामी दुई दायरा पाउँछौं जुन तिनीहरूलाई छुट्याउँछ। केहि घर र परिवारका लागि हुनेछ, जबकि अन्य मूल्यमा धेरै सस्तो हुने उद्देश्यले हुन्।
हुन सक्छ यो हुन सक्छ, हामी को अर्को श्रृंखला छ ठूला स्क्रीनहरूको साथ एन्ड्रोइड उपकरणहरू मल्टिमेडिया सामग्रीको लागि रमाईलो गर्न, फेशनको खेल खेल्न वा केवल हामीसँग घरमा कलमको साथ चित्रण गर्नुहोस्। हामी हेरौं के यी पाँच नयाँ ट्याब्लेटहरू पीसी र ल्यापटपमा विशेषज्ञता प्राप्त ब्राण्डले शुरू गरेको हो।
1 लेनोवो ट्याब E7, ट्याब E8 र ट्याब E10
2 लेनोवो ट्याब M10 र ट्याब P10 परिवार को लागी
लेनोवो ट्याब E7, ट्याब E8 र ट्याब E10
तीन ट्याब्लेटको यस श्रृंखलाबाट हामीसँग ट्याब E7 छ एन्ड्रोइड गो संस्करणको साथ आउने पहिलोको रूपमा। अब हामी यसको मूल्य अझ राम्ररी बुझ्न सक्छौं, र त्यो हो $ $० को लागि तपाईं एउटा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। ट्याब E70 का कुञ्जीहरू तीन हुन्: हल्का अनुप्रयोगहरू, अधिक आन्तरिक भण्डारण र उल्लेखनीय सुधारिएको प्रदर्शन। हामीले तिनीहरूलाई स्थितिमा हेर्नुपर्नेछ यदि हामीलाई इष्टतम प्रयोगकर्ता अनुभव प्राप्त गर्न सकिन्छ र केवल इरादा मात्र नभई केहि बढीमा रहन सक्छौं भने।
ट्याब E7 एक द्वारा चित्रण गरिएको छ 1040 स्क्रीनको लागि १०600० x minimum०० न्यूनतम रिजोलुसन ईन्च, केहि कतै दुरै हुन सक्छ र यसले राम्रोसँग बुझाउँछ एन्ड्रोइड गो संस्करणको अर्थ के हो। हामी २ MP रियर क्यामेरा र ०. MP MP VGA फ्रन्ट क्यामेराको बारेमा पनि कुरा गर्छौं। हिम्मतमा हामी मिडियाटेक MT2B चिप १.0.3 गीगा हर्जमा थपिएको पाउँछौं र १ जीबी रैम के हुन्छ। भण्डारण १GB जीबीमा रहन्छ, त्यसैले हामी क्लाउड र गुगल फोटोहरू तान्न सक्छौं।
हामीसँग लेनोवो ट्याब E8 पनि छ, यद्यपि यो भनिनुपर्दछ कि यो ट्याब्लेट एन्ड्रोइड N.० नौगटको साथ हो, केहि दिनहरू यसलाई सहजै बुझ्न सकिदैन। हामीसँग छ ट्याब E7 को रूपमा समान रैम, प्रोसेसर र भण्डारण। के फरक पार्छ यो is इन्चको आयाम र उच्च रिजोलुसनको साथ पर्दा हो: १२8० x p०० पिक्सेल। क्यामेराको गुणवत्ता पनि पछाडि 1280MP र फ्रन्टमा 800 MP को साथ बढाइएको छ। ट्याब E5 ले battery,2० mAh सम्मको ब्याट्रीमा आफै परिभाषित गर्छ।
हामी संग समाप्त ट्याब ई श्रृंखला को त्रिकूट, E10 को साथ। सफ्टवेयरमा यसको भित्र Android Go Edition पनि छ। स्क्रिन ठूलो छ किनकि यसलाई आफ्नै नाममा बोलाइन्छ १० ईन्च सम्म पुग्न। के रहन्छ त्यो ट्याब E10 जस्ता रिजोलुसनमा छ। त्यसोभए हामी राम्ररी देख्न सक्छौं कि लेनोभोले कसरी फरक स्पेसिफिकेसनको साथ खेल्छ ती कम मूल्यहरू दिन।
लेनोभो ट्याब E10 सँग चिप छ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन २१० र २ जीबी सम्म पुग्छ र्याम मेमोरी। के E8 बाट परिवर्तन हुँदैन यसको क्यामेरा र ब्याट्री क्षमता हो, त्यसैले हामीसँग पहिले नै Android Go संस्करणको साथ तीन ट्याब्लेटहरूको अन्तिम सारांश छ।
लेनोवो ट्याब M10 र ट्याब P10 परिवार को लागी
अघिल्ला तीनहरू लिभिंग रूममा टेबुलमा हुनु उचित हुन्छ, यद्यपि ट्याब M10 र ट्याब P10 आदर्श छन् यो धेरै कुराको लागि। तिनीहरू सफ्टवेयरको सर्तमा हामीले चाहेको सबै कुरा फ्याँक्न उत्तम शक्तिशाली ट्याब्लेटहरू हुन्।
लेनोवो ट्याब M10 सँग १० इन्चको फुल HD IPS स्क्रिन, क्वालकम चिप छ १.450 गीगाहर्ट्ज अक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 1.8०, GB जीबी र्याम र GB२ जीबी विस्तार योग्य आन्तरिक भण्डारणको माइक्रोएसडी कार्डको साथ। अन्य फाइदाहरू यसका डॉल्बी एटमस स्टीरियो स्पिकरहरू हुन् ती मल्टिमेडिया सामग्री संघर्षका लागि उत्तम। न त हामी light3० ग्राम र .32.१ मिलिमिटर मोटाईको साथ हल्का तौल बिर्सदैनौं।
लेनोवो ट्याब P10 सँग एम १० जस्तो एन्ड्रोइड .8.0.० ओरेओ पनि छ र यसको विशेषता हो अझ राम्रो हुन, Mill मिलिमिटर, र 7० ग्रामको साथ कम तौल। योसँग समान स्न्यापड्रैगन 440० चिप छ, यद्यपि यो GB जीबीको र्याम र GB 450 जीबीको आन्तरिक भण्डारणमा जान्छ। हामी फिंगरप्रिन्ट सेन्सर हाइलाइट गर्दछौं र फेरि ती स्टेरियो स्पिकरहरू, यद्यपि यस समयमा M4 मा दुईको सट्टा चार छन्।
यदि तपाईं परिवारको लागि ट्याब्लेट खोज्दै हुनुहुन्छ भने फोटोग्राफी मा एक सानो गुणवत्ता, M10 एक 8MP रियर र 5MP फ्रन्ट का साथ अनुपालन गर्दछ। यसले battery००० एमएएच क्षमतासम्म पुग्न ठूलो ब्याट्री पनि प्रदान गर्दछ।
लेनोभो ट्याब E7 अक्टुबर को महिना मा 79eयूरो को मूल्य मा आउँछ। लेनोवो E8 ११ ur को मूल्यको हुनेछ, यद्यपि यो अगस्टको यस महिनामा आइपुगेको छ। E119 10 यूरो को मूल्य संग नोभेम्बर को महीना सम्म नै टाढा छ। बाँकी बाँकी दुई, ट्याब M129 र P10 अक्टोबर महिनामा क्रमश: १ 10 199 र २ 269eयूरोमा आउँछन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: Androidsis » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » Android ट्याब्लेटहरू » लेनोवोले new नयाँ एन्ड्रोइड ट्याब्लेटहरू घोषणा गर्दछ जुन एन्ड्रोइड गो संस्करणको तीन हो
HTC अर्को अगस्ट 30० को लागी प्रक्षेपण घोषणा गर्‍यो। यो U12 जीवन हुनेछ?
डुजी एस :०: बजारमा पहिलो रबड गेमिंग फोन आधिकारिक हो